I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguRobert
Hayi, i-25 Steep Hill, yiNdlu entle yaseGeorgia yeDolophu, esandula ukulungiswa ngeempawu ezininzi zexesha, entliziyweni ye-Lincoln's Cathedral Quarter, ebekwe kwindawo ephumelele ibhaso iSteep Hill (ivotelwe esona sitrato saseBritane ngo-2012).
Ukulahla nje amatye kwiCathedral neNqaba yaseLincoln edumileyo kwihlabathi, kunye neBailgate ebukekayo kunye neCastle Square, eneendawo zayo ezininzi ezinqabileyo, iivenkile ezizimeleyo, iibhari zetapas, iikhefi, iibhari kunye neeresityu.
No. 25 ibekwe phezu Steep Hill Wines, iwayini yethu ezizimeleyo & gin abathengisi.
Indlu isasazwe kwimigangatho emi-3, ebandakanya amagumbi okulala ama-3 amakhulu onke anecathedral, inqaba okanye umbono wesixeko. Umandlalo womqhaphu waseYiputa kunye neetawuli ezithambileyo ezithambileyo, igumbi lokuhlala elikhulu kakhulu, elijonge iSteep Hill, igumbi lokuhlambela losapho, elibandakanya ishawari eyahlukileyo, ikhitshi elikhulu elisebenzayo (elinetafile yokutyela, indawo yokupheka), ekhokelela kwigadi yabucala. , kunye neembono zeLincoln Castle.
Abasebenzi babekhona iintsuku ezisi-7 ngeveki, ngeeyure eziqhelekileyo zokusebenza.